Olee Ihe Baịbụl Kwuru Gbasara Mmadụ Ikele Onye Meere Ya Ihe Ọma?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
O doro anya na ikele ndị meere anyị ihe ọma nwere ọtụtụ uru ọ na-abara anyị. Onye ọ bụla n’ime anyị kwesịkwara ịna-eme otú ahụ kwa ụbọchị.
Olee uru ikele ndị meere gị ihe ọma ga-abara gị?
IHE NDỊ DỌKỊTA KWURU
Otu isiokwu gbara n’akwụkwọ a na-akpọ Harvard Mental Health Letter, kwuru na “ikele ndị meere anyị ihe ọma na-eme ka anyị na-enwekwu obi ụtọ. Ọ na-emekwa ka anyị na-ekwu okwu ọma gbasara ha, na-eme ka ahụ́ na-adịkwu anyị mma. Ihe ọzọ bụ na ọ na-enyere anyị aka idi nsogbu, nyekwara anyị aka ka anyị na ndị ọzọ na-adịkwu ná mma.”
Baịbụl gwara anyi ka anyị na-ekele ndị meere anyị ihe ọma. Pọl onyeozi kwuru, sị: ‘Gosinụ na unu bụ ndị nwere ekele.’ O mekwara ihe a o kwuru. Dị ka ihe atụ, o ‘kelere Chineke n’akwụsịghị akwụsị’ n’ihi otú ndị mmadụ si kwere n’ozi ọma o ziri ha. (Ndị Kọlọsi 3:15; 1 Ndị Tesalonaịka 2:13) Ihe na-eme ka obi na-atọ anyị ụtọ abụghị naanị ikele onye meere anyị ihe ọma, kama, ịna-emekwa ihe ndị ọzọ gosiri na obi dị anyị ụtọ maka ihe e meere anyị. Ime otú ahụ ga-eme ka anyị ghara ịna-enwe anyaụfụ, ịna-ebu iwe n’obi, na ịna-eche na ihe e meere anyị bụ ihe e kwesịrị imere anyị. Ihe ndị a ga-eme ka ndị mmadụ na-agbara anyị ọsọ, anyị agharakwa ịna-enwe obi ụtọ.
Onye kere anyị na-egosikwa na obi dị ya ụtọ maka ihe e meere ya. Ọ naghị echefu ihe ndị mmadụ meere ya. Ndị Hibru 6:10 kwuru, sị: “Chineke abụghị onye ajọ omume ichefu ọrụ unu na ịhụnanya unu gosiri maka aha ya.” Nke bụ́ eziokwu bụ na Onye kere anyị weere ya na mmadụ ichefu ihe ọma e meere ya bụ ajọ omume.
“Na-aṅụrịnụ ọṅụ mgbe niile. Na-ekelenụ Chineke banyere ihe ọ bụla.”—1 Ndị Tesalonaịka 5:16, 18.
Olee otú anyị ịna-ekele ndị meere anyị ihe ọma nwere ike isi mee ka anyi na ha na-adịkwu ná mma?
IHE NDỊ A CHỌPỤTARALA
Ọ bụrụ na anyị ejiri obi anyị niile kelee onye nyere anyị onyinye, onye gwara anyị okwu ọma, ma ọ bụ onye nyeere anyị aka, ọ ga-eme ka onye ahụ mata na anyị hụrụ ya n’anya, nakwa na anyị ji ya kpọrọ ihe. Obi na-atọdị ndị anyị na-amaghị ụtọ ma anyị jiri obi anyị niile kelee ha maka ihe ọma ha meere anyị, dị ka imepere anyị ụzọ ka anyị gafee.
Jizọs kwuru, sị: “Na-enyenụ ihe, ndị mmadụ ga-enyekwa unu ihe. Ha ga-awụnyekwa n’apata ụkwụ unu ọ̀tụ̀tụ̀ dị mma, nke a bịara aka, yọkọta ọnụ, nke jubigakwara ókè.” (Luk 6:38) Ka anyị lebagodị anya n’ihe mere otu nwa agbọghọ onye ogbi aha ya bụ Rose. O bi na Vanuwatu, dị n’agwaetiti dị́ n’Ebe Ndịda Pasifik.
Rose na-aga ọmụmụ ihe Ndịàmà Jehova ma ọ naghị aghọtacha ihe a na-amụ. Ihe kpatara ya bụ na ya na ndị ọzọ na-abịa ọmụmụ ihe ahụ amaghị asụsụ ndị ogbi. Mgbe otu di na nwunye ma asụsụ ndị ogbi nke ọma bịara ọmụmụ ihe ha ma chọpụta ihe na-emenụ, ha malitere ịkụziri Rose na ndị ọzọ nọ n’ọgbakọ ahụ asụsụ ndị ogbi. Ihe a ha mere tọrọ Rose ezigbo ụtọ. Rose sịrị: “Obi na-atọ m ụtọ na m nwere ọtụtụ ndị enyi hụrụ m n’anya.” Obi na-adịkwa di na nwunye ahụ mma ka ha na-ahụ otú Rose si enwe aṅụrị, nakwa otú o si aza ajụjụ n’ọmụmụ ihe ma na-eme ihe omume. Obi na-atọkwa Rose ezigbo ụtọ ka ọ na-ahụ mbọ ndị ọzọ na-agba ịmụ asụsụ ndị ogbi ka ha na ya nwee ike ịna-ekwurịta okwu.—Ọrụ Ndịozi 20:35.
‘Ọ bụ onye na-achụ ekele dị ka àjà bụ onye na-enye Chineke otuto.’—Abụ Ọma 50:23.
Gịnị ga-enyere gị aka ịna-ekele ndị meere gị ihe ọma?
Ihe di anyị n’obi ka anyị na-echekarị n’echiche. Otu onye so dee Baịbụl aha ya bụ Devid gwara Chineke n’ekpere, sị: “Atụgharịwo m uche n’ọrụ gị dum; eji m obi m dum na-echebara ọrụ aka gị echiche.” (Abụ Ọma 143:5) O doro anya na Devid chebaara ihe Chineke meere ya echiche ma kelee ya maka ya. Ihe mere o ji kelee Chineke bụ na ọ na-echebara otú Chineke si eme ihe echiche mgbe niile. Ihe a bụ ihe o mere n’oge niile ọ dị ndụ.—Abụ Ọma 71:5, 17.
Baịbụl gwara anyị ihe magburu onwe ya anyị ga na-eme. Ọ sịrị: ‘Ihe ọ bụla nke bụ́ eziokwu, ihe ọ bụla nke na-akpali ịhụnanya, ihe ọ bụla nke a na-ekwu okwu ọma banyere ya, omume ọma ọ bụla dịnụ na ihe ọ bụla dịnụ nke kwesịrị otuto, na-echebaranụ ihe ndị a echiche.’ (Ndị Filipaị 4:8) Okwu a bụ́ “na-echebaranụ” gosikwara na anyị kwesịrị ịna-echebara ihe echiche. Ime otú ahụ ga-eme ka obi na-atọkwa anyị ụtọ maka ihe ndị mmadụ meere anyị, anyị ekeleekwa ha.
“Ihe m na-atụgharị n’uche ga-abụkwa ihe nghọta dị na ya.”—Abụ Ọma 49:3.